Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya oo kubiiray ololaha ridista Xukuumada ay katirsan yihiin +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya oo kubiiray ololaha ridista Xukuumada ay katirsan yihiin +Sawiro
Wasiiro katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa ku hoolan sidii codka kasoonida loogala noqon lahaa Xukuumada ay katirsan yihiin ,waxa ayna Wasiiradan oo sidoo kale ah Xildhibaano katirsan Baarlamaanka ay saxiixeen mooshin ka dhan ah R/Wasaaraha Soomaaliya.
Xubnahan Wasiirada ah ee ka shaqeenaya sidii loo ridi lahaa Xukuumada R/Wasaare Cabdi Wali, ayaa u badan kuwa Siyaasad ahaan taageersan Madaxweynaha Soomaaliya , waxa ayna wasiiradan heestaan balan qaad ku aadan in mar kale kusoo laaban doonaan Xukuumada la dhisayo hadii meesha laga saaro R/Wasaaraha.
Kulan ay shalay Magaalada Muqdisho ku yeesheen qaar kamid ah Xildhibaanadii R/Wasaaraha ka gudbiyay Mooshinka codka Kalsoonida lagala noqonayo waxaa kasoo muuqday oo goob joog ka ahaa qaar kamid ah Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya.
Wasiirada shalay ka qeyb galay kulanka ay yeesheen Xildhibaanada Mooshinka ka gudbiyay R/Wasaaraha Soomaaliya waxaa kamid ahaa ,Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibada Burci Maxamed Xamza, Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibada Mahad Maxamed Salaad , Wasiir kuxigeenka diinta iyo awqaafta Yuusuf Xeyle.
Golaha Wsaiirada iyo Baarlamaanka ayaa u kala qeyb samay labo garab kuwaa kala taageeraya Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/Wasaare Cabdi Wali , waxaana inta badan Xildhibaanada Baarlamaanka taageero xoogan ka heesta Madaxweynaha Soomaaliya.
Xukuumadii uu R/Wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid) waxaa ridisteeda kaalin weyn ku lahaa qaar badan oo katirsanaa golihii Wasiirada Xukuumadaasi, kuwaa oo heestay balan qaad la xariiray in ay mar kale noqonayaan Wasiiro, inkatoo markii dambe ay meesha ka baxeen Wasiiro badan oo kaalin weyn ku lahaa in la rido xukuumadii ay katirsanaayeen.